CleanMyMac X ayaa loo cusbooneysiiyay macOS Big Sur | Waxaan ka socdaa mac
CleanMyMac X waxay u cusbooneysiisay macOS Big Sur
Manuel Alonso | | Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac
Mar aan fogayn waxaan iska saarnay liisanka qariibka ah mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee ku yaal Mac App Store. CleanMyMac X waa mid ka mid ah barnaamijyadaas ama barnaamijyada ay tahay inuu qofku yeesho haddii aad leedahay Mac iyadoon loo eegin nooca uu yahay. Waa inay noqotaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu horreeya marka aad gacanta ku hayso mid ka mid ah Mac-yada cusub ee leh Apple Silicon iyo nooca cusub ee macOS Big Sur maadaama hadda la cusbooneysiiyay oo si buuxda u waafaqsan.
El caan ah Mac software CleanMyMac X ka MacPaw ayaa la cusbooneysiiyay si ay u bixiyaan a waafaqid buuxda macOS Big Sur iyo sidoo kale aalad cusub oo loogu talagalay Xarunta Ogeysiinta. Tani waxay xaqiijineysaa in CleanMyMac X ay si buuxda ula shaqeyn doonto nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka Apple isla mar ahaantaana naloo keenayo astaamo cusub.
CleanMyMac X, waa barnaamij loo sameeyay inuu ka caawiyo dadka isticmaala faylasha aan loo baahnayn inay ka saaraan Mac, oo ay ku jiraan dukumiintiyo hore, sawirro ama faylalka qashinka ah. Awoodda dhabta ah ee barnaamijkani waa taas sidoo kale waxay keeneysaa noocyo badan oo astaamo awood leh waxqabadkayaga Mac-ga ah ha ka dhigno mid hagaagsan.
Dhowr bilood ka dib baaris iyo beta, CleanMyMac X waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso macOS Big Sur. Interface ayaa la filaayo in si loo raaco macOS-ka cusub ee loo yaqaan 'Big Sur design design' iyo cusbooneysiintu waxay kaloo keeneysaa dhowr horumar. Tani waa sida horumariyeyaasha MacPaw ay u qeexeen:
Isla markii ay Apple shaaca ka qaaday nooca soo socda ee macOS ee WWDC bishaan Juun, waxaan bilownay inaan ka shaqeyno taageerida CleanMyMac. Waxaan sii deynay seddex nooc oo Beta ah waxaanan sameynay isbeddelo badan. Hagaajinta isdhaafsiga isticmaalaha iyo hagaajinta si loo hubiyo waxqabad hufan oo xasilloon oo leh nidaamka cusub ee hawlgalka. Hadda CleanMyMac X wuxuu ku habboon yahay macOS-ka cusub sida galoofyada.
Isticmaalayaasha waxay ku heli doonaan meel ay gaaraan aalad cusub iyada oo la cusbooneysiinayo barnaamijkan cusub. Qalabkaan waxaa lagu dari karaa Xarunta Ogeysiinta waxayna na siin doontaa macluumaad deg deg ah oo ku saabsan booska bilaashka ah ee keydinta Mac. Hal guji oo keliya oo ku yaal widget-ka, waxaad sidoo kale ku shaqeyn kartaa Smart Scan oo aad dhaqso ugu nadiifisaa Mac-gaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » CleanMyMac X waxay u cusbooneysiisay macOS Big Sur
Sida laga soo xigtay L0vetodream waxaa ku soo kordhaysa wax lala yaabo Masiixiga
Pixelmator Pro 2.0 sidoo kale wuxuu ku dhacaa tareenka Apple Silicon